Midowga Musharixiinta Oo Mar kale Jimcaha ku Baaqay Dibadbax ka Dhacaya Muqdisho | Saxil News Network
Golaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayey mar kale ku iclaamiyeen banaan bax kale oo looga soo horjeedo Farmaajo oo lagu qabanayo taalada Daljirka Dahsoon.
Guddoomiyaha Midowga Musharixiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa cadeeyay in aysan wali ka tanaasulin banaan baxii ay iclaamiyeen, waxa uuna mar kale shaaciyay in banaan bax nabadeed ku qabanayaan taalada Dajirka maalinta jimcaha ah.
Waxa uu sheegay Sheekh Shariif in banaan baxa nabadeed uu yahay xaq dastuuri ah oo qof walba uu kusoo bandhigi karo aragtidiisa, waxa uuna uga digay Madaxda dowlada in ay mar kale is hortaag ku sameeyaan banaan baxaasi.
Gudoomiyaha Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay in Madaweynaha mudo xileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo in uu dalka ku heysto xukun Millateri, isaga oo ugu baaqay Ciidamada in aan loo adeegsan wax shacri darro ah.
Banaan baxan ay mar kale ku baaqeen midowga musharaxiinta ayaa kusoo aadaya xili jimcihii lasoo dhaafay dowlada awood ciidan u adeegsatay joojinta banaan bax la filayay in taageerayaasha mucaaradka ku dhigaan taalada Daljirka Dahsoon.
Dowlada Soomaaliya ayaana la ogeyn in ay aqbali doonto banaan baxa nabadeed ay ku baaqeen Midowga Musharaxiinta in si nabad galyo ah uga qabsoomo Muqdisho, waxaana mar kale laga cabsi qabaa isku dhacyo iyo rabshado kale.